कोभिडको दैनिक संक्रमणमा कीर्तिमान «
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार २५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा एकैदिनमा कोरोना संक्रमितको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा गरी २२ हजार ८२८ जनाको परीक्षण गरिएको थियो । १७ हजार ८७२ जनाको पीसीआर टेष्ट गर्दा ८ हजार ७ सय ३० र १० हजार २ सय ५८ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा १ हजार ५ सय २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा ५६२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । हाल देशभर ३९ हजार ४४ संक्रिय संक्रमित छन् । यसअघि २८ वैशाख २०७८ मा ९ हजार ४८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
अबका दुई हप्ता कठिन
कोरोना संक्रमणका कारण अबको दुई हप्ता नेपालका लागि कठिन हुने सरकारले जनाएको छ । संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मंगलबार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले दुई हप्तासम्म कोरोना संक्रमण बढ्दै जाने बताए । बिरामीको लक्षणको आधारमा भन्दा अहिलेको संक्रमणको कारण ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै भएको दाबी उनले गरे ।
उनका अनुसार नेपालमा अझै २ हप्ता संक्रमण बढ्ने र उच्च विन्दुमा पुग्दा दैनिक २० हजार संक्रमण पुष्टि हुने मन्त्रालयको आकलन रहेको उनले बताए । संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्दा १० हजार संक्रमित लक्षणसहितका हुने र तीमध्ये करिब एक हजारलाई आईसीयूको आवश्यकता पर्ने, ३०० जना गम्भीर बिरामी हुने अनुमान रहेको उनले बताए। साथै १३ हजार बेडको आवश्यकता पर्ने उनले जानकारी दिए । अहिले नेपालमा फैलिएको संक्रमण ओमिक्रोन नै भएको डा. पौडेलको दाबी छ ।